Jaamacadda Badda Cas oo arday cusub qaadanaysa (dhegayso) – Radio Daljir
Jaamacadda Badda Cas oo arday cusub qaadanaysa (dhegayso)
Seteembar 28, 2017 1:15 g 0
Jaamacadda Badda Cas oo xarumo ku leh magaalooyinka Gaalkacyo iyo Bosaso ayaa sanadkan qaadatay arday cusub oo dhameeyey dugsiyada sare Puntland, kadib markii ay u fariisteen imtixaankii aqbalaadda ee jaamacadda.
Munaasabad lagu soo dhoweynayay ardayda, dhanka kallena imtixaanka aqbalaadda ay ugu farsiinayeen ayaa maanta kadhacday xarunta jaamacadda ee magaalada Bosaso.
Qaar ka mid ah ardayda u fariistay imtixaanka aqbalaadda ayaa niyad wanaag ka muujiyay inay sanadkan ku biirayaan aradayda waxkabarata jaamacadda.
Liibaan Axmad: Miyay Soomaaliya Leedahay Bulsho Rayid ah?
Jaaliyadda Somaliyeed ee Imaraadka oo Beeniyey in Lagu Xadgudbo Ganacsigooda (Warsaxafadeed)